Dameen mana fayyaa Iowa se’ati 24 darbe kana keessa sababa Covid-19 namni 6 du’uu gabaase
Published August 7, 2020 at 10:27 PM CDT
Dameen mana fayyaa Iowa se’ati 24 darbe kana keessa sababa Covid-19 namni 6 du’uu gabaase, namni haarawa qabame ammo 600 dha. Woodbury County keessati namni haarawa qabame 14 yoo ta’u waliigalatti namni qabame 3,700 dha.
Manni fayyaa Sioux land akka jedhetti babalinna coronavirus hir’uusuf yoo taate guyyaa guyyaa irraa uf eegunan bareeda akka ta’e hima.
Ogeessi fayyaa Kanaan milkaahufis haguuga fuula alatti godhachuu qabna. kan biraas, mana taa’i yoo kan namni waliin galtan dhukkubsate, walirraa fageenya, dhiqachuu fi yeroo maraa harka keenna qulqulleesu.
Ogeessi fayyaa Woodbury County akka jedhetti datan haarawni kan mullisu nama 1300 August 2nd qorataman keessa namni 81 akka qabaman hime. Virus qabamuu kan shakamu, percenti lama yookin sanii gadi, akka gabaasa manna fayyaa Siouxlandti. akkasumas, mataa keessatti qabadhu, bu’aa qoronnaa kannaa nama yaali baqaqsani yaalu fi adeemsa yaali tooko tokkos nidabalata.
kutaan Iowa yeroo dhukkuba kana keessati barumsa online barachuu akka fooyyese gabaase.
Qarqaarsi federaala kan corona virus dolaara million 19 kanra mana barumsa 327 fi mana barumsaa dhuunfaadha f qaarqaarsa interneetaf ergame. College dhunfa fi kan mootuma doolara million 7 kan fudhatan ta’a.
Anaan baruumsa hunduu keessati haala baayinna namaatifi hir’inni interneeni jiruun lalame kan ergamu ta’u.
Ayyaanni sales taxes waggaa Iowa keessati jalqabu jiru.guyyaa harraa fi bor keessati nama $100 gad waabite irra tax hin jiru. Kunis suuqi online dabalate.
Seerri ayyaana tax kun kan gad dhiifame Iawa keessati waggaa dheeran dura.
Local News LocalIowaNebraskaSouth DakotanewsCOVID-19Oromo
Governor Iowa kim Reynolds akka jetetti manneen barumsa harkii 50 yoo barumsa qamaan barachuu akka
Governor Iowa kim Reynolds akka jetetti manneen barumsa harkii 50 yoo barumsa qamaan barachuu akka banamu itti kennami laafisan ta’e, waggaa kana dhuma…
Governor Kim Reynolds jiraatota Iowa kuma kudhanin lakkaawaman warra yakamtoota Iowa keessa turaniif
Governor Kim Reynolds jiraatota Iowa kuma kudhanin lakkaawaman warra yakamtoota Iowa keessa turaniif mirga filannoo jaraa deebisuuf malatteesite.Akaa…
News 8.6.20: Oromo Protest, Schools Update, Drought and More
Iowa Governor Kim Reynolds provided a few more details on Thursday about requirements for school districts for in-person learning this fall.Iowa Governor…
Guyyaa har’aa Kamsaa, deparmantiin mana fayyaa Iowa se’aati 24 keessati namni 13 dabalataan sababa
Guyyaa har’aa Kamsaa, deparmantiin mana fayyaa Iowa se’aati 24 keessati namni 13 dabalataan sababa Covid-19 kan du’an yoo ta’u, namnni 650 haarawa qabamu…